Dhafarka Badan Oo Laga Qaado Xanuuno Halis Ah. - iftineducation.com
aadan21 / April 27, 2012
iftineducation.com – Waxaa xaqiiq ah in dhafarka badan iyo saacadaha hurdada oo yar in dhibaatooyin caafimaad u leeyihiin bani’aadamka ,iyadoo uu waxyeelayo jirka oo uu daaliyo .
Saacadaha habeenka oo aad seexato hadii ay yar yihiin taasi waxa ay kugu keeneysa in aad u nugulaato in ay kugu dhacaan xanuunada wadnaha iyo maskax xinjiroow sida lagu sheegay baaritaan la sameeyay dhawaan .
Qubarada baritaanka sameeyay waxa ay leeyihiin in lix saac waxii ka yar oo aad hurado taasi waxa ay soo dadajineeysa in aad cuduro badan u nugulaato 50% halka 15% halis aad ugu jirto maska xinjiroow.
Baarayaashaan ayaa ka digaya in dhafar badan aad habeenka sameeyso isla markaana aad xilli hore toosto , iyadoo baaritaankaan uusan aheyn kii ugu horeeyay ee la soo saara oo ak digaya xaaladaahaan oo kale .
Mid kamid ah Mucjisooyinkii ugu Yaabka Badnaa ee Caalamka oo Dhawaan lagu Arkay Sri Lanka(Talow waa maxay) BBC News